Kaoperativa Tselatra: mihenjan-droa ny tady ao amin’ny kaoperativa Tselatra | NewsMada
Kaoperativa Tselatra: mihenjan-droa ny tady ao amin’ny kaoperativa Tselatra
Tampoka tamin’ny mpandeha ny fitokonan’ny zotra rehetra ao anatin’ny kaoperativa Tselatra, ny faran’ny herinandro teo. Tafiditra ao anatin’izany ny zotra 147-146-178-147 Bis-147 D. Nitaky ny fialan’ny filohan’ny kaoperativa, lazain’izy ireo fa manao didy jadona, ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ny tompona fiara vitsivitsy.
Tsy eken’ireo mpitokona ny saran-dalana tokana 400 Ar. Tsapan’ny mpanampy mpamily fa tsy zakan’ny mpandeha ny tapa-dalana 400 Ar ary lazainy fa mihavitsy ny mpandeha vokatr’izany.
Tsy eken’izy ireo koa ny fandraisan’anjara 6 000 Ar isan’andro arotsaka ho an’ny kaoperativa fa lafo loatra. Ankoatra izany, lazain’ny mpamily sy ny mpanampy azy ho jadona ny fampanarahan-dalàna amin’ny fanamiana tokony hanaovana.
Voakiana ihany koa ireo mpanara-maso ny zotra manao ny asany amin’ny fampanarahan-dalàna ireo mpitatitra. Tsy tokony hiovaova ny takelaky ny taxi-be. Raha ny lalàna anatiny efa mipetraka kanefa raha ny tian’ireo mpamily, ny hanova izany araka izay tiany.
Tapaka, nandritra ny fifampidinihana, fa ahena ho 4 000 Ar isan’andro ny vola aloan’ny taxi-be tsirairay amin’ny kaoperativa. Nilaza kosa ny lehiben’ny kaoperativa Tselatra fa fanazarana ny mpandeha handoa saran-dalana tapa-dalana 400 Ar ny hatao.
Mamono antoka ny saran-dalana 200 Ar sy ny 300 Ar ka tazomina io 400 Ar io. Tsy maintsy hiakatra 500 Ar io saran-dalana io any aoriana ka hotazomina ho 400 Ar hatrany ho an’ny tapa-dalana, raha ny fanazavana hatrany.Voalaza fa niala tsy ho filoha lefitry ny UCTU intsony ny filohan’ny kaoperativa Tselatra.